Mivadika biby… | NewsMada
Efa mivadika biby… manao fanahim-biby ny olona ankehitriny raha zohina ity toe-javatra tany Vatofotsy Antsirabe ity. Efa tsy mitombina intsony ny filazan’ilay filozofa Aristote nilaza fa «Biby misaina ny olombelona » (L’homme est un animal raisonnable). Tsy vitan’olon-tsotra tokoa ny hamono olona ka hanapatapaka izany tahaka ity niseho ity. Na ny mijery sary fotsiny aza, efa mampihoronkoditra. Efa tsy ny saina intsony ny mitondra fa mety…ho rongony… Mampiseho endrika baribarianina amin’ny toetrantsika Malagasy ankehitriny ny tranga toy izao. Toa mihemotra any amin’ny tany baribarianina anatin’ny haizina isika, fa tsy mandroso ho amin’ny fahazavana.
Ankoatra ity vonoan’olona mahatsiravina ity, eo ny fakana an-keriny, ny fanafihana tranon’olona mba manana ny ampy, ny fanendahana ny sahirana, ny fanolanana ny malemy…
Indray miseho eto amintsika Ireo zavatra rehetra ireo. “Aiza no hiainana”, hoy ny vahoaka?
Mety hilaza indray ny rehetra fa vokatry ny krizy sy ny fahoriana eto amintsika ny mahatonga izany. Ekena fa anisany izany, saingy miainga amin’ny fifandraisan’ny samy olona ihany izany rehetra izany. Ny fifandraisan’ny mpitondra sy ny vahoaka entiny, ny fifandraisan’ny olona samy olona.
Misy ny ohatra ratsy avy any ambony midina mankany ambany, hany ka mifamono, mifampihinana ny olona. Manampy trotraka ny fielezan’ny vaovao, na tsara na ratsy, ao anatin’ny iray segondra fotsiny ny amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy sy ny haino aman-jery. Ny fiparitahan’ireny, anisan’ny manome lesona ratsy ho an’ny mpandray azy. Mampianatra ny sarimihetsika fa tsy mifampianatra ny fiarahamonina, izay efa very hasina. Tsy mahagaga raha tsy taitra amin’ny fandatsahan-dra ny olona sasany, ny fitsaram-bahaoka, sns.
Manana andraikitra goavambe ny mpitondra, ny mpanao politika amin’ny fanarenana ny fiarahamonina ankehitriny. Miainga amin’izy ireo ny modely ho an’ny olona, raha tsy izany, samy hivadika biby eo ny rehetra…